Oromoonni Aanaa Raayituu, Sawweenaa fi Daawwee Sarar irraa buqqa'an rakkoo cimaa keessa jiru - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Oromoonni Aanaa Raayituu, Sawweenaa fi Daawwee Sarar irraa buqqa’an rakkoo cimaa keessa...
Oromoonni Aanaa Raayituu, Sawweenaa fi Daawwee Sarar irraa buqqa’an rakkoo cimaa keessa jiru
Lammii kufe dafnee ol haa qabnu
Lammiileen Oromoo weerara Liyyuu Poolisiitiin godina Baalee (aanota Raayituu, Sawweenaa fi Daawwee Sarar) irraa buqqa’an rakkoo hamaa keessa jiru. Aanota kanniin keessatti guyyaa guyyatti lubbuun nama baay’ee bayaa, qabeenyi saamamaati kan jiru. Hunda caalatti namoonni weerara hanga ammaatti geggeeffameen hir’ina qaamaaf saaxilaman wal’ansa gayaa argataa hin jiran. Worri ijoollee fi lubbuu ufii fudhatee buqqates kan jiraataa jiru gaaddisa mukaa fi sharaa jala. Nyaata, bishaanii fi deeggarsa yeroo rakkoo kanatti isaan barbaachisu argataa akka hin jirres hubatameera. Waa’een barnoota ijoollee ammatti waan hin yaadamneedha.
Aanaa sadiin kanniin irraa namoonni buqaa’an kuma heddutti laakkayamu. Worri buqqa’ee gara Roobee, Shaashamannee fi Adaamaatti dhufe jira. Irra jireessi isaanii garuu ammas kan argaman daangaa irraa heddus osoo hin fagaatin gammoojjii keessatti. Bakka Iddicha jedhamu qofatti, Ginshiiri irraa km 200, buqqaatonni naannoo 16,000’tti tilmaamaman, kan bakka dhaqan dhaban, badhee/raasaa bakka jireenya isaanii godhataniiru. Ganda Addeellee keessas buqqaatonni 13,000 ta’an jiraachuu isaaniiti odeeffannoon arganne kan mul’isu. Wolumaagalatti, haalli isaan keessa jiran hedduu gaddisiisaa, baay’ee yaachisaadha.
Gargaarsaan dafanii isaan dhaqqabuudhaaf fageenni lafaa, dhabaminsi daandii fi odeeffannoo waytawaa sababa ta’uu mala. Rakkoo fi danqaan jiru kamuu gara isaan dagachuutti nu geessuu hin qabu, garuu. Rakkoo irra tankaarfanneeti kan woliif birmachuu qabu.
Koreen sadarkaa Oromiyaatti buqaatota gargaaruuf dhaabate, ummanni Oromoo fi hawaasni addunyaas lammilee keenna aanaa Raayituu, Sawweenaa fi Daawwee Sarar keessatti kufanii argaman hatattamaan dhaqqabuu qaba.
Previous articleDabratsiyoon Gabramikaa’el Dura Taa’aa Woyyaanee Ta’uudhaan Filatame
Next articleWoyyaaneen mosajjii PSS jedhamuun OMN, Jawaar Muhaammadii fi rogeeyyii Oromoo basaasuudhaaf dhama’aa turuun isii beekame